Qaybta birta ee Shiinaha oo caadi ku soo noqonaysa
Ku dhowaad 100 shirkad sameeya birta Shiinaha ayaa qiimahooda sare u hagaajiyay Isniintii iyada oo ay jireen kharashkii ugu badnaa ee alaabta ceeriin sida macdanta birta
Shiinaha ayaa joojinaya Dib-u-dhiska Dhoofinta Badeecadaha ee Qaboojiyaha laga bilaabo 1-da Ogosto
Shiinuhu wuxuu baajin doonaa dib-u-soo-celin badan oo ah canshuuraha qiimaha lagu daray qaar ka mid ah dhoofinta birta laga bilaabo 1da Ogosto, Wasaaradda Maaliyadda ayaa sheegtay Khamiista July 29. Waxaa ka mid ah dib-u-soo-celinta alaabooyinka birta ah ee guryaha lagu kala soocay ee ku jira xeerarka Nidaamka Is-waafaqsan 7209, 7210, 7225, 7226, 7302 iyo 7304, oo ay ku jiraan gariiradda la duubay iyo ...
Hordhaca qeexidda qaabka saxanka aluminiumka
Immisa nooc oo taarikada aluminium birta ah ayaa jira? Halkee laga adeegsadaa? Markaan iibsanno dhalooyinka aluminiumka, waxaan inta badan aragnaa in 1100 taarikada aluminiumka loo isticmaalo alaab ceeriin ah. Haddaba maxay si sax ah u sameeyaan moodooyinkaan saxan aluminium ...
Habka daaweynta xoqitaanka dusha ee saxan aluminium
Immisa nooc oo taarikada aluminium birta ah ayaa jira? Halkee laga adeegsadaa? Nabaro ka samaysan taarikada aluminiumka waxay u badan tahay inay dhacaan marka la samaynayo saxanka aluminiumka. Waxaa inta badan sababa habacsanaan ...
Immisa nooc oo taarikada aluminium birta ah ayaa jira?
Immisa nooc oo taarikada aluminium birta ah ayaa jira? Halkee laga adeegsadaa? Naqshadayaasha gudaha, xusidda taargooyinka birta ayaa ku dhawaad ​​u dhigma taarikada aluminiumka iyo birta birta ah. Dab aad iyo aad u xoog badan ...